Awdal Waa Laga Diidey Wadani BY:Maxamed Jeex | Lughaya.Com
Awdal Waa Laga Diidey Wadani BY:Maxamed Jeex
Added by Webmaster on November 27, 2016.
Saved under Faalo, Opinion
Markay argeen umada reer awdal sida xaqdarada ah ee axmed muumin seed loola dhamay ee sharaftiisa loogu ciyaaray ee looga doorbiday nin shaley dusha laga keensaday waxaa noosoo baxday in xisbiga wadani aan la isku aaminikari maadaama uu isbadalkiisu badanyahay.
Xisbiga wadani wax wanaag ah u mahayo dadka ka soo jeeda gobolada awdal,salal & galbeedka gabiley waayo? hada kahor waxaa baarlamaanka somaliland markii loo joojin waayey waxaa ka baxay gollaha wakiilada somaliland intii goboladaas kaga jirtey.
Waxaa iyana jirta oo aan ognahay in sanadkan markii dhibaatadu ka bilaabantey 6 lixdii gobood ee ka tirsan degmada lughay ee gobolka awdal wakhtigaasi oo gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna murashaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye wuxuu iska taagey meel cad oo wuxuu sheegey xuduudihii ingiriisuku ay yihiin muqadas.
laakin gudoomiyaha golaha wakiilada somaliland ahna gudoomiyaha xisbiga wadani waxaa ku cadaa hadaladiisii inuu ka soo horjeedo umada ku nool degmada lughaya uuna rabo in dhulkooda inba dhinac la raaciyo arintaasi oo u muuqatey cirro doonaayey in la jar jaro gobolka awdal.
Isku soo wada duub dadka degan gobolada galbeedka s/ land markii ay arkeen xisbiga wadani cadaalad xumadiisa ,markay ogaadeen inuu yahay xisbi beeleed,markey yaqiinsadeen wuxuu yahay,waxay go,aansadeen inaanan bulshadan reer somaliland lagu aaminikarin wadani ,sidaas awgeedana waxaan u sheegaynaa wadani waar cod hanaga sugina anaga hadaan nunahay galbeedka somaliland.